इमेज साप्ताहिक : 2022-06-12
किन मिले माओवादी–काँग्रेस ?
जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटमा निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख र सात जना सदस्यहरू पदभार ग्रहणपछि शुक्रवार कार्यालय परिषरमा ।
विदुर । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) नुवाकोटको निर्वाचन शुक्रवार निर्विरोध रुपमा टुङ्गििएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसले तयार गरेको गठबन्धको मात्रै उम्मेदवारी दर्ता भएपछि निर्विरोध रुपमा जिससको चुनावी प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्यो । उम्मेदवारको समर्थक र प्रस्तावक बस्नका लागि आवश्यक दुई मध्ये एमालेसंग एक भोट मात्रै भएकोले उसले उम्मेदवारी नै दर्ता गराउन सकेन । मुख्य दुई ठूला दलनै मिलेपछि एक भोट भएको एमाले पेलिएको हो ।
मंगलवारसम्म माओवादी केन्द्र एक्लै जिसस गठन गर्ने ‘मुड’मा देखिएको थियो । माओवादीको प्रदेश समितिमा नुवाकोटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताको बैठकमै काँग्रेससंग सहकार्य नगर्ने बहुमत स्वर थियो । तर बुधवार उम्मेदवारको मनोनय पत्र दर्ता गर्ने बेलामा भने काँग्रेससंगको ‘गठबन्धनको निरन्तरताको’ देखिदो कारण बाहिर आयो ।
जिल्ला सभामा माओवादीसंग १२, काँग्रेससंग ११ र एमालेसंग १ मत छ । एमाले नुवाकोटका जिम्मेवार नेताहरूले जिससमा निःशर्त माओवादीलाई सघाउने बताउँदै आएका थिए । अन्तिम समयमा एमालेले दुई सदस्य मात्रै माग गरेको थियो । माओवादीले प्रमुख, उपप्रमुख र अन्य पाँच सदस्य लिने अवसरलाई ‘अवसरको रुपमा’ देखेन । माओवादी एक नेताका अनुसार दुई कारणले माओवादीले एक्लै जिसस गठन नगरेर काँग्रेसलाई उपप्रमुख र चार सदस्य दिएको छ । नौं सिटमा प्रमुख सहित ४ सिट माओवादीले राखेर उपप्रमुख सहित ५ सिट काँग्रेसलाई दियो । यसरी दुई सदस्य मागिरहेको एमालेसंग माओवादीले सहकार्य नगर्नमा संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा समेत काँग्रेस–माओवादी बीच हुने गठबन्धन मुख्य रहेको बताइएको छ । माओवादी जिल्ला संयोजक पुष्प लामिछानेका अनुसार केन्द्रको निर्देशन अनुसार काँग्रेससंग जिससमा गठबन्धन भएको हो । अझै बाँकी निर्वाचनहरूमा गठबन्धन कायम रहने र नुवाकोटको सन्र्दभमा मात्रै नभई काँग्रेस बलियो भएको अन्य जिल्लामा माओवादीलाई जिससमा प्रमुख दिने गरी छलफल भएकोले यसो गरेको उनले बताए ।
तर, समाचार श्रोतका अनुसार नुवाकोटमा एमालेसंग माओवादीको गठबन्ध हुने सम्भावना एमालेको विदुर नगर कमिटिका कारण भत्किएको हो । विदुर नगरपालिका वडा नं. ९ मा माओवादीबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष हरिराम भण्डारीको अख्तियारले अघि बढाएको मुद्दाको विषयमा एमालेले अराजनीतिक व्यवहार देखाएको आरोप छ । ‘भण्डारीको सन्र्दभमा हामीलाई एमालेले बढी नै लखेटेको हो’, एक नेताले भने– ‘त्यस घटनाबाट हामीले एमालेसंग विश्वास गरेर सिङ्गै जिसस दाउमा राख्न सकेनौं ।’ एमालेको मत काँग्रेस तर्फ जाँदा मात्रै पनि गोलाप्रथाबाट निर्वाचित हुनुपर्ने र प्राप्त भइरहेको समन्वय प्रमुख पद गुम्न पनि सक्नेमा माओवादी भित्र लामो छलफल भएको थियो ।
जिसस प्रमुखमा रजिन्द्रविक्रमसिंह ठकुरी (माओवादी) उपप्रमुखमा दलबहादुर तामाङ (काँग्रेस) निर्वाचित भएका छन् । सदस्यहरू माओवादीका तर्फबाट रामचन्द्र पौडेल, मोहन पुडासैनी र धनमाया विक, निर्वाचित भएका छन् । नेपाली काँग्रेसबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ, सम्झना सेढाइँ, सन्तोषी देवकोटा र कान्छी सुनुवार जिल्ला समन्वय समितिमा निर्वाचित भएका छन् ।
को हुन् रजिन्द्रविक्रम सिंह ठकुरी ?
विदुर । जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटको प्रमुखमा माओवादी–काँग्रेस गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता भएपछि जिल्लामा एकाएक रजिन्द्रविक्रम सिंह ठकुरीको सोधिखोजी सुरु भयो । राजनीतिक वृत्तमा कम सुनिएको नाम जिल्ला प्रमुखका रुपमा उदाएपछि उनको बारेमा धेरैले अनेक अनुमान र टिप्पणी गरे । नुवाकोट क्षेत्र नं. १ का उनको परिचय क्षेत्र नं. २ का आफ्नै नेता कार्यकर्तामा पनि कम थियो ।
नुवाकोट निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नं. ४ मा ठकुरीले बैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा वडा सदस्य जितेका छन् । उनी नेकपा माओवादी केन्द्र पञ्चकन्या गाउँ समितिको उपाध्यक्ष हुन् । ४० वर्षका उनी २०५६ सालबाट तत्कालिन माओवादीको सशस्त्र युद्धमा लागेका हुन् । युद्धताका जनमुक्ती सेनामा काम गरेका रजिन्द्रविक्रम सिंह ठकुरीले एसएलसीसम्मको अध्ययन गरेका छन् ।
कृषक पृष्ठभुमीका ठकुरी आमाबुबा, श्रीमती र एक छोरासंग पञ्चकन्या–४ मा बस्छन् । गाउँमा उनी वासु नामले चिनिन्छन् ।
इमेज साप्ताहिक image weekly (इमेज साप्ताहिक) at Monday, June 13, 2022 No comments:
विदुर । नव निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले वियज उत्सव र भोजभत्तेरबाट अहिलेसम्म छुटकारा पाएका छैनन् । निर्वाचित हुनका लागि नागरिकहरू बीच उम्मेदवारले गरेको प्रतिवद्धता पुरा गर्नका लागि अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूले कहिले र कसरी जाने भनेर सोच्न पनि नभ्याइरहेको बेलामा विदुर नगरपालिकाका एक वडा अध्यक्ष भने आफ्नो चुनावी वाचा सम्झदै टोलटोलमा पुगिरहेका छन् ।
विदुर नगरपालिका वडा नं. २ का अध्यक्ष दीपक कायस्थ चुनाव प्रतिबद्धता पुरा गर्दै अहिले समुदायर गाउँटोलमा पुगिरहेका छन् । अन्य जनप्रतिनिधिहरू अझै भोजभत्तेरमा अलमलिरहँदा उनी भने नागरिकहरूको माग अनुसारको सामाग्री आफ्नै निजी खर्चमा खरिद गरेर घरघर गइरहेका छन् । भोट माग्ने क्रममा मतदाताको घरदैलोमा पुग्दा देखेको खानेपानीको समस्या हटाउने प्रतिबद्धता वडा अध्यक्ष कायस्थले जितेको केहि दिनमै खानेपानीको समस्या समाधान गरेका छन् ।
उनको सहयोगबाट सुर्यगढी गाँउपालिकाको सिप्लिघान मुहान गरी विदुरको नुवाकोट दरवार क्षेत्रसम्म खानेपानी ल्याएपछि ३ सय भन्दा बढी घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । चुनाव जितेपछिको भोजभत्तेर जस्ता अनावश्यक खर्च नगरी नागरिकहरूको दैनिक जीवनमा परेको समस्या समाधान तर्फ आफु लागेको वडा अध्यक्ष कायस्थले बताए । सिप्लिघान मुहान गरी नुवाकोट क्षेत्रसम्म लाग्ने ६३ र ५० ईन्च साईजको पाइप र सम्पुर्ण ‘फिटिङ’का सामग्रीहरू उपलब्ध गराएको उनले बताएका छन् । वडाबासीको समस्या समाधानका लागी कुनैपनि कसुर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।
कायस्थ नेकपा एमालेबाट वडा नं. २ मा निर्वाचित भएका हुन् । नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेर उठाएका उम्मेदवार भन्दा उनले १४८ बढी मत पाएका थिए । गठबन्धनका तर्फबाट काँग्रेसका उम्मेदवार सुरजप्रसाद श्रेष्ठले ७९२ मत र कायस्थले ९४० मत पाए ।
नेताहरूको आँखामा नुवाकोटको क्षेत्र नं. १
विदुर । स्थानीय तहको निर्वाचन शुक्रवार (जेठ २७ गते) बाट सकिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटको पदाधिकारीहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान र समन्वय प्रमुखलाई सपथ खुवाइसंगै यो पटकको स्थानीय तह निर्वाचन नुवाकोटमा सकियो । तर स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न नहुँदै संघ र प्रदेशको निर्वाचनका सरगर्मी नुवाकोटमा बढ्न थालेको छ । आउँदो मंसिरमा हुने अनुमान गरिएको संघीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी घोषणाको क्रम सुरु भइसकेको छ ।
नुवाकोटको क्षेत्र नं. १ मा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट दुई नेताले उम्मेदवार हुने ‘इन्ट्रेस्ट’ देखाएको समाचारहरू स्थानीय तह निर्वाचन मैजादो नहुँदै बाहिर आएका छन् । नुवाकोट काँग्रेस भित्र देखिएको महत र केसी विभाजकै निरन्तरताको रुपमा दुवै पक्षबाट क्षेत्र नं. १ मा उम्मेदवारीको स्वघोषणा आएका छन् । क्षेत्र नं. १ बाट संघीय सांसदका लागि नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत र नुवाकोट काँग्रेस सभापतिका निकटतम प्रतिद्धन्द्धी तथा काँग्रेस महासमिति सदस्य डा. केदारनरसिंह केसीले उम्मेदवारीको घोषणा गरिसकेका छन् । डा. केसीले आफ्नो फेसबुक मार्फत २०४८ सालपछिका कुनै पनि निर्वाचनमा आफ्नो जन्मथलोबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गरी अघि बढ्न नपाएको भन्दै चुनाव लड्न चाहेको घोषणा गरेका हुन् । प्रवक्ता डा. महतले क्षेत्र नम्बर १ बाट चुनाव लड्ने तयारी गरेको प्रचार गरेको तेस्रो दिननै डा. केसीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेका हुन् ।
अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हितबहादुर तामाङले प्रतिनिधित्व गर्ने त्यस क्षेत्रमा २०५१ सालदेखि काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महत काँग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार बन्दै आएका छन् । अघिल्लो पटक समेत डा. महत काँग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका थिए । अघिल्लो संघीय निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धनबाट माओवादीका नेता हितबहादुर तामाङ क्षेत्र नं. १ मा उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएका थिए । अहिले दाई महतले स्वास्थ्य अवस्थाका कारण ‘फिल्डको राजनीति नगर्ने’ चर्चा चलिरहेको समयमा भाई महत (डा. प्रकाशशरण महत) ले क्षेत्र नं. १ अथात् दाईको ‘स्पेश’ लिन खोजेको काँग्रेसका एक नेताले बताएका छन् ।
नुवाकोट १ मा उनी उम्मेदवार बन्नका लागि डा. रामशरण महतलाई मनाउनुपर्दछ । देउवा निकट भएकाले उनलाई रामशरण महतलाई भन्दा टिकट पाउन सहज पनि छ । गृह जिल्लाबाट उम्मेदवार बन्ने तयारीमा रहेका महतले पछिल्लो समय नुवाकोट केन्द्रित कार्यक्रमलाई महत्व दिने गरेको पनि जिल्ला नेताहरू बताउँछन् । केही महिनाअघि उनले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई नुवाकोट १ मा लगेर कार्यक्रम गरेका थिए । गत निर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवार पोखरेलले २३ हजार २९ मत ल्याएर विजयी भएका थिए । कांग्रेसका महतले १३ हजार १६९ मत ल्याई फराकिलो अन्तरले पराजित भएका थिए । महतले अहिले रोजेको नुवाकोट १ मा पनि कांग्रेस अघिल्लो पटक फराकिलो अन्तरले पराजित भएको थियो ।
माओवादी केन्द्रका हितबहादुर तामाङले ३६ हजार ४७३ मत ल्याउँदा कांग्रेसका उम्मेदवार डा. रामशरण महतले २७ हजार ९२० मत सहित पराजित भएका थिए । शिवपुरी, ककनी, पञ्चकन्या, तादी, सूर्यगढी र दुप्चेश्वर पालिका नुवाकोटको १ नम्बर क्षेत्रमा पर्दछन् । शिवपुरी, सूर्यगढी र तादीमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा काँग्रेसले जितेको छ । काँग्रेसले जितेका यि तीन गाउँपालिकमा मध्ये पनि शिवपुरी र तादीमा माओवादी केन्द्रको प्रभाव बढी देखिएको छ । यि दुई पालिकाको अध्यक्षमा काँग्रेसले जितेको भएपनि उपाध्यक्षदेखि बहुमत वडाहरू माओवादीसंग छ ।
यो संगसंगै काँग्रेस र माओवादी केन्द्र बीच संघीय निर्वाचनमा हुनसक्ने गठबन्धनलाई पनि जोडेर हेर्न थालिएको छ । काँग्रेस माओवादीबीच गठबन्धन हुँदा क्षेत्र नं. १ माओवादी केन्द्रको भागमा पर्ने सम्भावना प्रवल रहेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताएका छन् । उनका अनुसार त्यस्तो अवस्थामा माओवादीका तर्फबाट हितबहादुर तामाङ उम्मेदवार बन्ने छन् । गठबन्धन हुँदा क्षेत्र नं. १ माओवादीलाई र क्षेत्र नं. २ काँग्रेसलाई भाग लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा क्षेत्र नं. १ मा तामाङ र क्षेत्र नं. २ मा काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बहादुरसिंह लामा तामाङ उम्मेदवार बन्ने सम्भावना बढी छ ।
यस्तै नेपाली काँग्रेसमा महाधिवेशन प्रतिनिधि, पुर्व जिल्ला प्रवक्ता कृष्ण कुइँकेलले समेत क्षेत्र नं. १ बाट संघीय सांसदमा उठ्ने घोषणा गरेका छन् । राजनीतिक दलप्रति नागरिकहरूको मोह भङ्ग भएकोले आफ्नो उम्मेदवारी स्वतन्त्र रहने कुँइकेलले बताएका छन् । पार्टीले उम्मेदवार नबनाए वा बनाएपनि आफ्नो स्वतन्त्र रुपमा संघीय सांसदका रुपमा उठ्न चाहेको उनले बताएका छन् । राजनीतिक दलहरू प्रति नागरिकहरूको वितृष्णा बढ्दो देखिएकोले आफ्नो उम्मेदवारी कुनै दल विशेषबाट नहुने तर्क उनको रहेको छ । क्षेत्र नं. १ मा पर्ने दुई वटै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा समेत स्वतन्त्र उम्मेदवार तयार गरेर स्वतन्त्रको प्यानल नै तयार गरेर आसन्न निर्वाचनमा होमिने कृष्ण कुइँकेलले शनिवार इमेज साप्ताहिकसंगको कुराकानीमा बताएका छन् ।
तारकेश्वर र म्यागङले जगाएको आश
टोल फ्री सेवाको सुरुवात गर्दै तारकेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष शिव अधिकारी (बीचमा) उपाध्यक्ष हरिप्रसाद रिमाल (दाँयाँ) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजु अधिकारी (बाँयाँ)।
विदुर । स्थानीय तह निर्वाचनको दोश्रो चरणको निर्वाचनको नतिजासंगै नव निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले काम थालेका छन् । विशेष गरी पाँच वर्ष संघीयता कार्यान्वय, कार्यालय व्यवस्थापन र जनप्रतिनिधिलाई सिक्नका लागि बढी समय खर्च भएपनि अबको जनप्रतिनिधिबाट नतिजामुखी कामको अपेक्षा नागरिकहरूले गर्न थालेका छन् । नयाँ जनप्रतिनिधिहरू सामान्य कामबाटनै नागरिकहरूलाई प्रभावित बनाउने र नयाँ केही गर्ने योजना सहित चुनिएका छन् । नागरिकहरूको दैनिकीमा सघाउनेदेखि जनउत्तरदायि सरकारका रुपमा स्थानीय तहलाई उभ्याउने क्रममा नुवाकोटमा दुई पालिकाहरूले सुरुवात गरेको फरक दुई कामले आशाको सञ्चार गरेको छ ।
नुवाकोटको तारेकश्वर गाउँपालिकाले २४ घण्टा सेवा दिने गरी निःशुल्क हटलाईन टोल फ्री टेलिफोन सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । त्यस्तै नुवाकोटको अर्को स्थानीय सरकार म्यागङ गाउँपालिकाले छोरीहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययन नै नगराई विवाह गराईदिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्नका लागि एक महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकाको पहिलो कार्यपालिका बैठकले छोरीलाई २० बर्ष पुरा गरि कम्तीमा १२ कक्षा उत्तिर्ण गराई विवाह गराउने परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
गाउँपालिकाको मानव विकास सूचांकमा समेत उल्लेख्य सुधार आउने र छोरीहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गराउन अभिभावकहरू उत्प्रेरित हुने गाउँपालिकाको विश्वास रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष आशा तामाङले बताएका छन् । कम्तीमा एउटा एम्बुलेन्स खरिद गर्ने निर्णय समेत गाउँपालिकाले गरेको छ ।
उता, तारकेश्वर गाउँपालिकाले २४ घण्टा सेवा दिने गरी निःशुल्क हटलाईन टोल फ्री टेलिफोन सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । गाउँपालिका कार्यालय दाङसिङमा अध्यक्ष शिव अधिकारीले सेवा केन्द्रको उद्घाटन गरेका छन् । गाउँ कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
नागरिकले १६६००१४५२२२ मा फोन गरेर सल्लाह, सुझाव र जुनकुनै गुनासोलाई २४ सैं घण्टा फोन गरेर टिपाउन सक्ने छन् । नागरिकबाट आएका गुनासोलाई सम्बोधन गरिने र सकारात्मक सल्लाह, सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने योजनाले सेवा सुरु गरेको अध्यक्ष अधिकारीले बताए ।
यो सेवाले नागरिक र जनप्रतिनिधि बीचको सम्बादलाई अझ सहज बनाइए नागरिकको हितमा काम गर्न ठुलो टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । बर्खायाम पनि सुरु भएको र आगामी बर्षको बजेट निर्माणको तयारी समेत सुरुभएकाले आजैदेखि यो सेवा सञ्चालना ल्याएको गाउँपालिका अध्यक्ष अधिकारीको भनाई रहेको छ ।
यस्तै, तारकेश्वर गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर तथा बालुवाखानी तत्काल बन्द गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । बैठकले क्रसर र बालुवाखानी सम्बन्धि कार्यविधि बनाउन गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत राजु अधिकारीलाई जिम्मेवारी समेत दिएको छ ।
वडा सदस्यको गाडी भाडामा
दाङसिङ । तारकेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर ३ बाट निर्वाचित वडा सदस्य चोकराज शाक्यको बा २० च ८८६८ नम्बरको बोलेरो जिप गाउँपालिकाको कार्यालयले भाडामा लिएको छ ।
गाउँपालिकालाई गाडी आवश्यक रहेको र सस्तो भाडामा उपलब्ध भएकोले शाक्यको भाडा लिएको गाउँपालिका अध्यक्ष शिव अधिकारीले बताएका छन् । गाउँपालिकासंग एउटा मात्रै सरकारी नम्बर प्लेटको स्कोरपियो गाडी छ । अहिले लिइएको वडा सदस्यको गाडीको मासिक भाडा डेढ लाख रुपैयाँ रहेको छ । शाक्य काँग्रेस महासमिति सदस्यसमेत हुन् । उनी गाउँपालिका अध्यक्षका दावेदार थिए । तर, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख बनाउने गरी उनलाई वडा सदस्य बनाइएको थियो ।
बिजुलीको तारमा आठ घण्टा
माइला विक शनिवार तारबाट निकालिएपछि फुटुङ्गमा रहेको नवजीवन परोपकार समाजमा ।
विदुर । शनिवार झण्डै आठ घण्टा एक पुरुषले उच्च भोल्टेज क्षमताको प्रसारण लाइन (हाइटेन्सन)मा समय विताए । घण्टौंसम्म तारतारै उता उता हिडिरहेका उनका कारण नुवाकोट मात्रै नभई दुनियाँ नै तरंगित बन्यो । मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको भनिएका ति पुरुषलाई अहिले काठमाडौं राखिएको छ । उनलाई शनिवार राती नै काठमाडौं लगिएको छ ।
ककनी गाउँपालिकास्थित विद्युत्को प्रसारण लाइनमा झुण्डिएका युवकलाई नेपाली सेनाको टोलीले शनिवार राती उद्धार गरेको हो । तालिमप्राप्त सैनिकहरू टावरमा चढेपछि शनिबार बिहानदेखि तारमा बस्दै आएका व्यक्ति ओर्लिएका हुन् । ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङका अनुसार ककनी वडा नम्बर ७ घाँडेफेदीबाट तल झारिएको हो । साँझ ७ः२० मा उनलाई बिजुलीको तारबाट जमिनमा उतारिएको थियो । परिवार नभएकोले जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले काठमाडौं फुटुङ स्थित नवजीवन परोपकार समाजमा उपचार र संरक्षणका लागि शनिवार राती नै राखेको छ ।
उच्च भोल्टेज क्षमताको प्रसारण लाइनमा बेलकोटगढी नगरपालिका १३ का ४२ बर्षिय माइला भनिने हिमबहादुर सुनार विक शनिबार बिहान ११ बजेतिर चढेका थिए । उनी पोलमा चढ्न थालेपछि करेन्ट लाग्न सक्ने भन्दै स्थानीयको खबरपछि प्राधिकरणले उक्त प्रसारण लाइनको बिजुली काटेको थियो । बिक तारमा झुण्डिएर हिँडिरहेको अवस्थामा स्थानीयहरूले भिडियो समेत बनाएर सार्वजनिक गरेका थिए । बिक तारमा झुण्डिएको तस्बिर र भिडियो शनिबार दिनभर सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रुपमा सेयर गरिएको छ ।
झन्डै ८ घण्टापछि बिकलाई सेनाको टोलीले उद्धार गरेको हो । बिक तारमा चढेर लामो समय नओर्लिएका कारण देशभरको विद्युत् व्यवस्थापन प्रणाली अस्तव्यस्त भएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार बिहान ११ बजेदेखि करिब ६५ मेगावाट बिजुली प्रणालीभन्दा बाहिर गएको थियो । ‘८ घण्टासम्म माथिल्लो त्रिशूली–३ ’ए’ र अर्को ५ मेगावाट जतिको सानो आयोजनाको बिजुली प्रसारण प्रभावित बन्यो,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले भने, ‘प्रणालीमा त्यत्ति ठूलो परिमाणमा बिजुली अभाव भएपछि लोड व्यवस्थापनका लागि कतै लाइन काट्ने, कतै कम क्षमतामा बिजुली पठाउने गरिरह्यौं ।’ माग धान्नका लागि दिनभरी नै भारतबाट समेत बिजुली ल्याइएको थियो ।
एक साथ प्रभा र अम्बिका : विदुर नगरपालिकाको उपप्रमुखमा निर्वाचित प्रभा बोगटीलाई सम्मान गर्दै शुक्रपथ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष नरेन्द्र विष्ट । संस्थाले शुक्रवार नुवाकोटमा आयोजना गरेको सेवा कार्यालय उद्घाटन समारोहमा उनको सम्मान गरेको हो । साथमा उपप्रमुख पदमा नेकपा एमालेबाट प्रतिस्पर्धा गरेर उपविजेता बनेका अम्बिका पौडेल नेपाल ।
तस्बिर : इमेज साप्ताहिक
‘बागमतीमा युवा सशक्तीकरण’
विदुर । प्रदेश युवा परिषद्को कार्यालय बागमतीको आयोजनामा युवा प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम अन्र्तगत वक्तृत्वकला प्रतियोगिता विदुरमा सम्पन्न भएको छ । बागमती प्रदेश युवा परिषद् स्थापना दिवसको अवसरमा प्रतियोगिताको आयोजना भएको हो ।
‘सिर्जनशीलता र उद्यमशिलता प्रवद्र्धनः बागमतीमा युवा सशक्तीकरण’ विषयक वक्तृत्वकला प्रतियोगितामा नुवाकोट जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका आठ र रसुवा जिल्लाका चार जना युवायुवतीको सहभागीता थियो ।
१६–२४ उमेर समुहको खुल्ला वक्तृत्वकला प्रतियोगितामा नुवाकोटका महिलातर्फ बेलकोटगढी नगरपालिकाका बिविना लामिछाने र पुरुषतर्फ रामेश्वर गजुरेल प्रथम भएका छन् ।
रसुवाबाट प्रतियोगितामा सहभागि मध्ये महिलातर्फ कालिका गाउँपालिकाका कृतिका पौडेल र पुरुषतर्फ नौकुण्ड गाउँपालिकाका दावाछिरिङ लामा प्रथम भएका छन् । विजेताहरूलाई जनही ३ हजार रुपैंयाँ पुरस्कार र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ ।
बिजेताहरूले आगामी असार ४ गते हेटौडामा हुने प्रदेशस्तरिय वक्तृत्वकला प्रतियोगितामा उनीहरू चार जनाले नै सहभागिता जनाउने नुवाकोटका अध्यक्ष उद्वव पनेरुले जानकारी दिएका छन् ।
रसुवा जिससमा भयो गोलाप्रथा
विदुर । जिल्ला समन्वय समिति रसुवाको निर्वाचनमा दुई पक्षले बरोवरी मत पाएपछि गोला प्रथाबाट बिजेता छानिएका छन् । त्यसरी गोला तान्दा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा एमाले विजयी भएको छ ।
नौ सदस्य पदको लागि शनिबार भएको निर्वाचनमा मत बराबर भएपछि गोलाप्रथा गरिएको थियो । गोला तान्दा प्रमुखमा एमालेका अशोककुमार घिमिरे, उपप्रमुखमा विजय लामा निर्वाचित भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजेन्द्र नेपालले बताए ।
समितिको सदस्यहरूमा एमालेका कामी छिरिङ तामाङ, खुवाप्रसाद पौडेल र कांग्रेसका खिलबहादुर न्यौपाने निर्वाचित भएका छन् ।
महिला सदस्यमा एमालेको देशी रानी तामाङ, कांग्रेसको कारतोक लामा र सबिता गुरुङ निर्वाचित भएका छन् । दलित तथा अल्पसंख्यक सदस्यमा कांग्रेसकी पार्वती विश्वकर्मा निर्वाचित भएकी छन् । पाँच वटा गाउँपालिका रहेको रसुवा जिल्लामा पालिकाको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षमा एमाले र कांग्रेसले ५/५ सिट जितेका थिए ।
चुनाव चिह्न जनताको टाउकोमा
विदुर । नेकपा एमालेका सांसद नारायण खतिवडाले नुवाकोटको सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापनको लागि भइरहेको समस्याहरूको समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । जेठ २४ र २५ गते फोहोर व्यवस्थापनको क्रममा प्रहरीले ज्यादती गरेको भन्दै त्यसको ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नुवाकोटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद खतिवडाले स्थानीय चुनावमा भोट लिनको लागि चुनाव चिह्नको लागि प्रयोग भएको लौरो नुवाकोटका जनताको टाउको र ढाडमा बजारिएको टिप्पणी गरे ।
‘फोहोर व्यवस्थापन गर्ने निहुँमा नुवाकोटे जनताहरूमाथि दमन भएको छ । स्थानीय चुनावमा चुनाव चिह्न रहेको लौरो अहिले नुवाकोटका जनताहरूको टाउको र ढाडमा बजारिन पुगेको छ । उनले भने ।
लायन्स क्लब अध्यक्षमा आचार्य
विदुर । लायन्स क्लब अफ नुवाकोट उपकार २३५ जे को बर्ष २०२२/२३ को लागि नयाँ कार्य समिति चयन भएको छ ।
अध्यक्षमा राजकुमार आचार्य, उपध्यक्षमा अञ्जली पाण्डे, सचिबमा अमित गजुरेल र कोषध्यक्षमा हरिबंश ढकाल चयन भएका छन् । त्यस्तै कोअडिनेटरहरूमा सन्तोष उप्रेती, बिबेक लामिछाने, रामेश्वर अधिकारी, सुशान अधिकारी, किशोर अर्याल छन् ।
एमालेको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीलाई
विदुर । नेकपा एमाले जनसंगठन समन्वय संयन्त्र नुवाकोटले १५ बुँदे माग गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । मंगलबार जनसंगठन समन्वय संयन्त्रका संयोजक निलकण्ठ आचार्य नेतृत्वको समुहले प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद रिसालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई १५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
नेपाली जनताको प्रमुख पेशा र नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषि व्यवसाय हाल आएर संकटग्रस्त अवस्था छ । एकातिर कृषि पेशा परम्परागत रुपमा नै सञ्चालन भएका कारण उत्पादनमा वृद्धि हुन सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर उत्पादन लागत बढी भएका कारण कृषकहरू मारमा परिरहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालीहरूको प्रमुख खाद्यवाली मकै तथा धान उत्पादन गर्ने बेला नै रासायनिक मलको अभाव भइरहेको छ, तसर्थ यथाशीघ्र कृषकको लागि पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मलको आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न हामी जोडदार माग गरेको छ । शैक्षिक सत्र शुरु भएको एक महिना बित्दा पनि पाठ्यपुस्तक नपाएर विद्यार्थीहरूले शिक्षा प्राप्त गर्नबाट बञ्चित हुनु बिडम्बना हो । तसर्थ बालबालिकाहरूलाई यथाशीघ्र पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराईयोस् ।’
भण्डारीको निलम्बनले उठाएको दुई प्रश्न
निलम्बनमा परेका विदुर नगरपालिका वडा नं. ९ का वडा अध्यक्ष हरिराम भण्डारी ।
विदुर । निर्वाचन आयोगले आफूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नीतिगत छिद्रको पहिचान नगर्दा नुवाकोटको विदुर नगरपालिका वडा नं. ९ मा नागरिकहरूको काम नै बन्द भएको छ । निर्वाचित वडा अध्यक्षलाई निलब्न गर्नु भन्ने पत्र पठाएको र वडा अध्यक्षले कार्यवहाक दिएको सदस्यले समेत काम गर्न नपाउने भएपनि वडाबाट हुने दैनिक कामकाज नै प्रभावित बन्यो ।
यताको जस्तै देशै भरीको घटनाक्रमलाई हेर्दा एउटा स्थानीय तह र अन्य दुईवटा वडा हाल नेतृत्वबिहीन भएका छन् ।
गत मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक सूचना निकाल्यो । अख्तियारले निर्वाचन आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अनि सम्बन्धित स्थानीय तहमा पत्र पठाएर भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बित भएका र विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका जनप्रतिनिधिहरूलाई निलम्बन गर्न भन्यो ।
अख्तियारको यो निर्णयपछि दुई प्रश्न एकैसाथ उब्जिएका छन् ।
पहिलो, भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिले उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित हुँदासमेत प्रतिस्पर्धी र सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले पत्तो पाएनन् ।
दोश्रो, स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भएको व्यवस्था, जसले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुन छेक्दैन, तर निर्वाचित भएपछि पदमा बहाल हुन र काम गर्न रोक्छ ।
भ्रष्टाचारको कसुरमा आयोगबाट विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गरी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका र कसुर ठहर भएका व्यक्तिहरू स्थानीय तहको निर्वाचन, २०७९ मा निर्वाचित भएको भन्दै निलम्वनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सम्वन्धित निकायमा लेखि पठाएको छ । जेठ २४ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हरिराम भण्डारीको हक यस्तो भनेको छ ।
‘नुवाकोट जिल्ला, विदुर नगरपालिका, वडा नं. ९ स्थित सुलक्षण माध्यमिक विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक हरिराम भण्डारीले विद्यालयको रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोले निजउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर अपराधमा सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र सोही दफाको उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम सजायको मागदाबी लिई यस आयोगबाट मिति २०७६।५।२० गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भई उक्त मुद्दा विचाराधीन रहँदाकै अवस्थामा निज हरिराम भण्डारी स्थानीय तहको निर्वाचनमा बिदुर नगरपालिका, वडा नं. ९ को वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएकोमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ अनुसार मुद्दा दायर भएको कुनै व्यक्ति÷राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र सम्वन्धित स्थानीय तहमा लेखी पठाइएको छ ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारका मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा निर्वाचित उनी बाहेक एक गाउँपालिका अध्यक्ष र दुई वडाध्यक्ष निलम्बनमा परेका छन् ।
भ्रष्टाचारको मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनिएको भन्दै अख्तियारले स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई पत्र लेखेको छ ।
अख्तियारका अनुसार कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाको अध्यक्ष देवीदत्त उपाध्यायविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । अघिल्लो कार्यकाल वडा नम्बर २ को वडाध्यक्ष रहेका बेला सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी पु¥याएको भन्दै उनीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा हालेको थियो ।
यस्तै मोहन्याल–३ का वडाध्यक्ष नन्दराम गिरीलाई पनि मुद्दा टुंगो नलागेसम्म निलम्बनमा परेका छन् । अघिल्लो पटक पनि वडाध्यक्ष रहेका उनीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा विचाराधीन छ ।
अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष सुरतबहादुर रावललाई पनि निलम्बन गर्न अख्तियारले पत्र पठाइसकेको छ । उनी कालीदेवी माविको शिक्षक रहँदा नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरेको भन्दै उनीविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो । यो मुद्दा हाल विचाराधीन छ ।
निर्वाचन आयोग के भन्छ ?
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया संसदले पारित गरेको ऐन अनुसार नै आयोगले उम्मेदवारहरूको योग्यता र अयोग्यताको मापदण्ड निर्धारण भएको बताउछन् ।
‘ऐनमा नै भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई फैसला अन्तिम भएर बसेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने भनेको छ’ उनी भन्छन्, ‘भ्रष्टाचारको आरोप लागेकै भरमा हामीले उम्मेदवार हुन रोक्न मिल्दैन ।’ उनले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा पनि उस्तै योग्यता तोकिएकाले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका कुनै व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुन रोक्न नसकिने बताए ।
भ्रष्टाचारमा मुछिएको र सार्वजनिक पदमा भएको व्यक्तिमाथि मुद्दा चलेपछि प्रमाण लुकाउने जोखिम हुने मान्यताका आधारमा उसलाई निलम्बन गरिन्छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नासाथ त्यसको किनारा नहुँदासम्म सार्वजनिक पदमा भएको व्यक्ति निलम्बन हुन्छन् । तर निर्वाचन सम्बन्धी कानूनी त्यससँग अनुकुल हुने नदेखिएकाले भ्रष्टाचार मुद्दा लागेकै कारण उम्मेदवार हुन रोक नहुने व्यवस्था राखियो ।
राष्ट्रिय चर्चा पाएको नुवाकोटको विद्यालय
विदुर । गएको साता उत्कृष्ठ केही सामुदायिक विद्यालयहरूको सूचीमा नुवाकोटको एक सामुदायिक विद्यलायको नाम समेत देख्दा धेरै अलमलमा परे । आफ्नो छिमेकमा भएको गाउँमा भएको विद्यलाय उत्कृष्ठ विद्यलायको सूचीमा देख्दा धेरै अभिभावकहरूले त पत्याउनै मानेनन् । अनि कत्ति अभिभावक र विद्यार्थीहरू त अलमलमा समेत परे ।
विद्यार्थीको अधिक चाप हुने १२ सरकारी विद्यालय शिर्षकमा बाहिर आएको एक समाचारमा विदुर नगरपालिका वडा नं. १२ स्थित विरेन्द्र माविको पनि चर्चा भयो । हुन त शहरदेखि गाउँसम्म नियाल्ने हो भने, निःशुल्क विद्यार्थीहरूलाई पठनपाठन गराउने विद्यालयहरू निकै कम भेटिन्छन् । त्यसमा पनि अभिभावकहरू विद्यार्थीहरूले गरूङ्गो झोला बोकेर हिड्दा मात्र धेरै पढ्ने सम्झिन्छन् । शैक्षिक क्षेत्रमा पनि एक प्रकारको विभेद कायमै छ सरकारी विद्यालय र बोर्डिङ विद्यालयबीचको । अभिभावकहरूलाई सरकारी विद्यालयहरूको नाम त्यति धेरै थाहा हुन्न तर, बोर्डिङ स्कुलहरूको सबैलाई थाहा हुन्छ । जहाँ शिक्षालाई पनि दुई भागमा छुट्याइन्छ ।
कोभिड पछिको अस्तव्यस्त शैक्षिक क्षेत्र विस्तारै चलाएमान बन्दैछ । विद्यालयको गतिविधिहरू केही परिवर्तन भएको हामी आफैंले पनि देख्न सक्छौं । केही नयाँ आश गर्न लायक विद्यालयहरू पनि छन् भने केही अस्तव्यस्त । यसैबीच फरक शैली र गुणस्तरीय शिक्षामा दखल राख्दै आएको नुवाकोटको विदुर–१२ चैनपुरमा रहेको विद्यालय हो ‘विरेन्द्र माध्यमिक विद्यालय’ । जसको स्थापना २०३८ सालमा भएको थियो । विभिन्न कारणले अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्दै आएको विरेन्द्र माविले महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयको शाखा विद्यालयको रूपमा रहेर केही समय पठनपाठन गराएको थियो । पछि समस्या समाधान तर्फ लम्किएपछि विद्यालयले आफै सरकारबाट स्विकृती लिएर पठनपाठन शुरूवात गरेको थियो । विभिन्न अड्चन र समस्याहरूको समाधान गर्दै उक्त विद्यालयले हाल ४ औँ दशक पार गरिसकेको छ ।
२०७२ सालमा आएको भुकम्पले गर्दा विद्यालयको भौतिक भवनमा क्षति पुगेपछि विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको र पछि दुई दाताहरू राजेन्द्र खड्का र उपिन्द्र खड्काको पहलमा विद्यालय हाल नुवाकोट जिल्लाकै पहिलो नम्बरको उत्कृष्ट विद्यालय बन्न सफल भएको विद्यालयका विज्ञान शिक्षक रामेश्वर पौडेलले बताए । विद्यालय परिवार राजेन्द्र र उपिन्द्रले यस विद्यालय सञ्चालन गर्न पुर्याएको योगदान प्रति आफुहरू नतमस्तक रहेको बताउँछ । विद्यालयमा यतिबेला ५ सय हाराहारी विद्यार्थीहरू अध्यायनरत छन् । भौतिक संरचनाको कमी र विद्यालयको स्रोत साधनले गर्दा सिमित विद्यार्थी मात्रै भर्ना गरिएको विद्यालयले जनाएको छ ।
करिव ७÷८ वटा वडाका विद्यार्थीहरूले यस विद्यालयमा पठनपाठन गर्दै आइरहेका छन् । विद्यालयमा पहिला नेपाली माध्यमबाट पठनपाठन हुदैँ आएको थियो । नयाँ संरचना र भुकम्प पछिको विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको चाँपले गर्दा हाल विद्यालयले अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गराउदैँ आइरहेको छ । हाल उक्त विद्यालयमा १६ जना शिक्षकहरू अध्यापन गराउदैँ आइरहेका छन् । शिक्षकहरूको लगनशीलता र विद्यार्थीहरूको मिहिनेतले गर्दा विद्यालय यस अवस्थामा पुगेको अभिभावकहरू बताउँछन् । आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयले नीःशुल्क रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउदैँ आइरहेकोमा आफुहरू खुसि रहेको अभिभावकहरू बताउँछन् । विद्यालयमा ३ जना शिक्षकहरू र ४ जना कर्मचारीहरू निजी स्रोतको खर्चमा तलव लिन्छन् भने बाँकी अरू सरकारले विद्यालयलाई उपलब्ध गराउदैँ आएको रकमबाट तलव पाउँने गरेका छन् । यतिहुदाँ हुदैँ पनि विद्यालयले जिल्लाकै उत्कृष्ट साइन्स ल्याव तथा उत्कृष्ट कम्युटर ल्याव सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
विद्यालयले टाढाका विद्यार्थीहरूको सहजताका लागि एउटा बसको सुविधा समेत सञ्चालन गरेको छ भने अर्को बस चाडैं सञ्चालनमा ल्याउने तयारी रहेको छ । विद्यालयले विद्यार्थीका लागि पुस्तक तथा विद्यालय पोशाक निःशुल्क उपलब्ध गराउदैँ आइरहेको छ । गरिव तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूको लागि कपि, कलम समेत विद्यालयले नै उपलब्ध गराउदैँ आइरहेको छ । साथै विद्यालयले विद्यार्थीहरूको कक्षा ८ तथा कक्षा ९, १० को रजिस्टेशन फारम समेत विद्यार्थीहरूबाट एक रूपैयाँ पैसा नलिई विद्यालयले नै भरिदिने र आवश्यकता अनुसारको निःशुल्क अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्दै आइरहेकाले आफुहरूलाई थप सहज भएको विद्यार्थीहरू बताउँछन् । यसले गर्दा हामीले परिक्षामा गुणस्तरीय अंक प्राप्त गर्ने गरेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन् ।
विद्यालय विहान १० बजेबाट सञ्चालन भएर साँझ ४ बजेसम्म पठनपाठन हुने र विद्यालयले सामाजिक, अंग्रेजी, गणित, नेपाली, विज्ञान, कम्युटर, शारीरिक शिक्षा, पेशा व्यवसाय, इकोनोमिक्स, अप्सनल म्याथ लगायतका विषयहरू पठनपाठन गराउदैँ आइरहेको विज्ञान शिक्षक रामेश्वर पौडेलले जानकारी दिए । उनले अगाडि थप्दै विद्यालयलाई यहाँसम्म पुर्याउन हालका वडाध्यक्ष उपिन्द्र खड्काको ठुलो साथ सहयोग रहेको बताए । विद्यार्थीको हालको नतिजा उत्कृष्ट रहेको छ । ‘यस वर्ष हामीले भौतिक संरचनाको कमी र विद्यालयको स्रोत साधनले गर्दा ६० जना मात्र नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्न सकेका छौँ । कोभिडका कारण यस वर्ष हाम्रो विद्यालयबाट २३ जना विद्यार्थीहरू मात्र एसईई परिक्षामा सहभागी भएका थिए भने, आगामी वर्ष ३२ जना विद्यार्थीहरू सहभागी हुन्छ’ पौडेलले भने ।
दाताहरूको सहयोगबाट सञ्चालनमा आएको विद्यालयको गुणस्तर देख्दा अभिभावकहरू हर्षित छन् । विद्यालयलाई वार्षिक करिव एक करोड भन्दा माथि पैसा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा हालका विदुर नगरपालिका–१२ का वडाअध्यक्ष उपिन्द्र खड्काले उपलब्ध गराउदैँ आइरहेका छन् । विद्यालयले नर्सरीदेखि कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीहरूलाई एउटै नजरले हेर्ने र एकैकिसिमको व्यवहार गर्ने गरेको छ । विद्यालयलाई हाल मावि तहसम्म बढुवा गरि कक्षा १२ सम्म सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको र त्यसै अनुरूप प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा हालका विदुर नगरपालिका–१२ का वडाअध्यक्ष उपिन्द्र खड्काले बताए । विगत लामो समयदेखि निःशुल्क शिक्षा दिदैँ आएपनि सरकारको आखाँमा यस विद्यालय नपरेकोमा खड्काले दुःख व्यक्त गरे ।
विद्यालयले निःशुल्क रूपमा नर्सरीदेखि कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीहरूलाइ खाजा तथा खाने पानी समेत टाढाको बाटोबाट निःशुल्क रूपमा ल्याएर उपलब्ध गराउदैँ आइरहेको छ । भर्ना हुन आउने विद्यार्थीहरूको लागि पुस्तक, पोशाक उपलब्ध गराउदै आएको छ । विद्यालयले कोभिड महामारीको समयमा स्थानीयवासीहरूको सुविधाका लागि कोभिड ल्याव, आइसोलेसन तथा क्वारेन्टाइनको समेत व्यवस्था गरेको थियो ।
२०७९ साल जेठ ३० गतेको सम्पादकीय
सिसडोलमा १७ वर्षदेखि अत्याचार
दुई वर्षका लागि नुवाकोटको तत्कालीन ओखरपौवा गाविस(४ सिसडोलमा सेनिटरी ल्यान्डफिल साइट सञ्चालन गर्न १ जेठ २०६२ मा सम्झौता भयो । सिसडोलको १४५ रोपनी सार्वजनिक र अधिग्रहण गरिएको २८७ गरी ४३२ रोपनीमा ल्यान्डफिल साइट बनाउन सम्झौता गरियो । त्यसमा महानगरले स्थानीय बस्तीमा प्रावि स्कुल स्थापना, सुविधा सम्पन्न अस्पताल चौकी र सडक निर्माणलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने मात्र होइन, स्वास्थ्य बिमा, उपचार र रोजगारीलगायतको प्रत्याभूति गरिएको थियो । उक्त सम्झौतामा फोहोर व्यवस्थापन वैज्ञानिक ढंगबाट हुने, फोहोरले पारेको प्रभावका बारेमा हरेक चार÷चार महिनामा प्रयोगशाला परीक्षण गरिने, वातावरणीय अवस्थाको अध्ययन गरिने, लिचेट व्यवस्थापन हुने विषय समेटिएको छ । ओखरपौवाको सिसडोल काठमाडौंबाट २७ किलोमिटर टाढा छ । फोहोर बोकेका टिपर काभ्रेको बनेपादेखि काठमाडौंको बालाजुबाट मुड्खु, ओशो तपोवन, नुवाकोटको तीनपिप्ले, कागती गाउँ, महालक्ष्मीथान, रातमाटे हुँदै कोल्पुबाट सिसडोल पुग्दै आए । सम्झौता दुई वर्षका लागि भनिएको थियो किनकि यो अवधिभित्र थप तीन किलोमिटर पर बन्चरेडाँडामा सेनिटरी ल्यान्डफिल साइट बनाउने सरकारको योजना थियो । तर, सम्झौता भएको १७ वर्षसम्म सिसडोलमा नै काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जन भइरह्यो । सेनिटरी ल्यान्डफिल साइट भनेको फोहोरलाई वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ हो । तर, महानगरले घरदेखि अस्पतालबाट निस्किने सबै फोहोरलाई विसर्जन मात्र गर्दै आयो । सुरुमा सेनिटरी ल्यान्डफिल साइटमा फोहोरलाई छुट्याएर मात्रै सिसडोलमा विसर्जन गर्ने भनिएको थियो । त्यसैले लिचेट (लेदो) जम्मा गर्न सानो पोखरी पनि बनाइएको थियो । तर, त्यो फोहोरको मात्रा बढ्दै गएपछि फोहोर सिधै विसर्जन गर्न थालियो । लिचेट पाखो, बाटोमा बग्दै सिधै कल्पु खोला बग्छ । यसबाट निस्कने लिचेटका कारण खोला, वातावरण पूरै प्रदूषित बनेको छ । प्रदूषणका कारण खोलामा त अब कुनै जीव छैनन्, बस्तीको जीवनसमेत संकटमा छ ।
२०६३ सालमै १६ बेडको अस्पताल निर्माण गर्ने सहमतिमा भनिएको थियो तर अहिलेसम्म बनेन । सम्झौतापत्रमा अस्पताल र भेटनेरी अस्पताल पनि निर्माण गर्ने भनिएको थियो, त्यो पनि भएको छैन । स्थानीय स्वास्थ्यचौकीमा पनि औषधि छैन । स्वास्थ्यचौकीमा एक/एक जना एचए र स्टाफ नर्स, एक जना अहेव, एक जना ल्याब असिस्टेन्ट र दुई जना कर्मचारी कार्यरत छन् । तर, अहिले झाडापखाला लागेका बिरामीलाई जीवनजलसमेत दिन नसक्ने अवस्थामा स्वास्थ्य चौकी छ । तथ्याङ्कअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यचौकीमा ५२ सय बिरामी आएका थिए भने यसपालि जेठमै यो संख्या ६४ सय पुगेको छ । फोहोरका कारण रोग बढिरहेको र झाडापखाला, टाइफाइड, छालासम्बन्धीका रोगी मात्र होइन, बस्तीमा क्यान्सर पनि बढेको छ । विभिन्न संघसंस्थाले बेलाबेलामा गर्ने स्वास्थ्य परीक्षणमा सिसडोलका बासिन्दाहरूमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या फेला पारिरहेको छ । फोहोरसँगै आउने दुर्गन्ध, जमिन र जल प्रदूषणले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुगेको देखिन्छ । क्यान्सरका रोगी बढेको देखिन्छ, कारण फोहोरको टक्सिन हुन सक्छ । सिसडोलका बासिन्दा बिरामी हुँदा उपचार गर्न अस्पताल छैन, स्वाथ्यचौकीमा हेल्थ असिस्टेन्ट नभएकाले अहेवले चलाएका छन् ।
स्वास्थ्यचौकीमा सिटोमोलको गोली छैन, तर सशस्त्र प्रहरी भने राइफलमा गोली लोड गरेर तैनाथ छ । स्वास्थ्यचौकी दिउँसो दुई बज्दानबज्दै बन्द हुन्छ, तर सशस्त्रको बेस क्याम्प भने २४ सै घण्टा सक्रिय छ ।
पछिल्लो केही दिनदेखि फोहोर ल्याउन रोक लगाउन स्थानीयहरू आन्दोलित छन् । सरकार उनीहरूलाई दमन गर्न थालेको छ । झाडापखालाका लागि जीवनजल र सामान्य रोगका लागि औषधिको एक गोली ब्यवस्था नगर्ने सरकारले आन्दोलन दमन गर्ने भन्दै प्रहरीलाई हातहितयार र गोली सहित पठाएको छ । अत्याचारमा परेका स्थानीय विरोधमा उत्रिएलान् भनेर सरकारले सशस्त्र प्रहरीको पोस्ट नै खडा गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, ल्यान्डफिल्ड साइड सुरक्षा बेसमा डीएसपीको कमान्डमा ३० जना सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । स्वास्थ्यचौकीमा सिटोमोलको गोली छैन तर सशस्त्र प्रहरी भने राइफलमा गोली लोड गरेर तैनाथ छ । स्वास्थ्यचौकी दिउँसो दुई बज्दानबज्दै बन्द हुन्छ, तर सशस्त्रको बेस क्याम्प भने २४ सै घण्टा सक्रिय छ । त्यति मात्र होइन, सिसडोल पुग्नुअघि कागती गाउँमा पनि अस्थायी प्रहरी चौकी छ । जहाँ असईको कमान्डमा ७ जना प्रहरी २४ सै घन्टा खटिन्छन् । सिसडोलबाट आउने दुर्गन्ध, प्रदूषणको प्रकोप वरपरका गाउँका वासिन्दाहरूले समेत सहँदै आएका छन् । पहिला दुर्गन्ध रोक्न नियमित रूपमा औषधि छरिन्थ्यो । तर, अहिले त्यो पनि बन्द भएको छ । पहिले बस्तुलाई खुवाउनेदेखि धार्मिक कर्म र नुहाउनका लागि स्थानीयहरूले कोल्पु खोलाको पानी प्रयोग गर्थे । खोलाकै पानी प्रयोग गरेर धान रोप्थे । अहिले पानी नै विषाक्त भएको छ । ५० मुरी धान फल्ने खेतमा अहिले ७ मुरी पनि फल्दैन ।
यो सबै समस्याको जानकारी सरकारसंग छ, किनकी सरकार आफ्नै सिसडोलमा समस्या सिर्जना गर्दै आइरहेको छ । अनि महानगरपालिकाले आफ्नो प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका लागि कहिल्यै सकारात्मकसम्म भएको पनि देखिएको छैन । यसरी नागरिहरूमाथी अत्याचार गरेर भइरहेको फोहोर व्यवस्थालाई तत्कालै रोक्नु जरुरी छ । नागरिकहरूको स्वास्थ्य, कृषि उत्पादनमा ह्रास आउन नदिने प्रयासको थालनी अनि पानीको संरक्षण र वातावरण सुरक्षणलाई प्राथममिकतामा राखेर मात्रै हुने फोहोर व्यवस्थापन स्थानीय नागरिकहरूका तफृबाट स्विकार्य हुनसक्छ । यसतर्फ तत्कालै सोच्नु, नागरिकहरूको पक्षमा काम थाल्नु जरुरी छ ।
२०७९ साल जेठ ३० गते । वर्ष : १५, अंक : ३५
इमेज साप्ताहिक image weekly (इमेज साप्ताहिक) at Sunday, June 12, 2022 No comments: